कामै नगरी धनी हुने सपना, लोट्टो बिक्रीले बनायो रे’कर्ड – Eps Sathi
कामै नगरी धनी हुने सपना, लोट्टो बिक्रीले बनायो रे’कर्ड
April 16, 2021 1276
ध’नी बन्ने चाहाना हर कोहिको हुने गर्दछ। ध`न कमाउन धेरै मेहनत र परिश्रम चाहिन्छ। तर सुति सुति ध´नी बन्ने स´पना बुन्नेहरु पनि धेरै रहेको पाइन्छ। यस्ता मानिसहरु लो’ट्री चि’ठ्ठामा बढि रुचि राख्ने गर्दछन। यस्तै लो`ट्री चि’ठ्ठा हो कोरियामा लोट्टो। गत बर्ष दक्षिण कोरियामा यस्तो चि’ठ्ठाको बिक्री ले नयाँ उ’चाइ लिएको छ। गत बर्ष मात्रै ४ ट्रिलियन कोरियन वन बराबरको लो’ट्टो बिक्री भएको छ।
गत मंगलबार कोरियाको अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयले दिएको डाटाअनुसार गत बर्षमात्र यहाँ ४.७१ ट्रिलियन वन बराबरको लोट्री चि’ठ्ठा बिक्रि भएको पाइएको छ। यो बिक्री अघिल्लो बर्षको तुलनामा ९.३ प्रतिशत धेरै हो। यो अहिले सम्मकै स’बैभन्दा धेरै हो। सन २००८ पछि लोट्री बिक्री हरेक बर्ष ब’ढ्दै गइरहेको पाइएको छ।
गत बर्ष कोरियाको अर्थ तथा वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको सर्भेमा ५५.४ प्रतिशतले आउँदा दिनहरुमा आफू लोट्री टि’केट किन्ने धारणा ब्यक्त गरेको पाइयो। यसमा पनि २३.७ प्रतिशतले आफूहरु हरेक महिना लो’ट्टो किन्ने बताए भने १५.९ प्रतिशतले हरेक २ हप्तामा एकपटक किन्ने गरेको बताए।
उमेर समूहका आधारमा हेर्दा धेरैजसो ३० देखि ५० बर्ष उमेरकाले धेरै लोट्री चि’ठ्ठा किन्ने गरेको पाइएको छ। ३० देखि ४० बर्षकाले कम्तिमा पनि आफूहरुले एकपटक चि’ठ्ठा कि’नेको बताए। लि’ङ्गअनुसार महिला भन्दा बढि पुरुषहरु चि’ठ्ठामा आ’कर्षित रहेको पाइएको छ। सर्भेका अनुसार करिब ६५.८ प्रतिशत पुरुषहरु चि’ठ्ठा जि’तेर ध´नी बन्ने स’पना बोकेको बताए भने करिब ४५ प्रतिशत महिलामा यस्तो स’पना रहेको पाइयो।
Prevइन्छनले फो’होर लिन नमा’नेपछि ख्यङ्गीदो र सउल त’नाबमा, अब कहाँ फाल्ने?
Nextआसिफ र कुशलको किर्तिमानी साझेदारीसँगै नेपालले नेदरल्याण्डलाई सजिलै ह’रायो
दक्षिण कोरियामा चुरोट बिक्री बढ्दो
सउलको जनसंख्या घट्यो, ३२ बर्षपछि १ करोडभन्दा तल
जापानमा श्रीमतीसहित बस्दै आएका एक नेपालीले गरे आत्मह’त्या
प्राय धेरैले चिनिरहेका छैनन यो फोटो कसको हो? उनि अहिलेका सुपरस्टार हुन
१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया? हेरौं यि १२ वटा फोटोमा (10011)
कोरियामा खिसुक्सामा ढोका नलगाई सुत्दा कम्पनीको खोङजाङनिम छिरेर…. (10006)
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ (6758)
कोरियाले कामदार लाने प्रकृया सुरु, सिसिभिआइ फाराम खुल्यो (सूचनासहित) (5615)
हाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं (5324)
हाइपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने नेपालीलाई जहाँ भए पनि पक्राउ गरिने (4532)
खुल्यो कोरियन भाषा परीक्षा, हेरौं कहिलेबाट फाराम भर्ने? (4451)
हाइपर फण्ड ठगि योजना ‘पोन्जी’ को नयाँ स्वरुप (4017)
इपिएस मार्फत कोरिया आएको १ महिना नबित्तै एक नेपाली युवालाई कोरियाले गर्यो देश निकाला (3532)
कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि खुशीको खबर, कोरियाले जारी गर्यो भिजासम्बन्धी यस्तो नियम (3496)